फिर्ता आउनुहोस् र सदाका लागि रहनुहोस्, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
«यो सत्य हो कि म जाँदैछु र तपाईंको लागि ठाउँ तयार गर्दछु, तर यो कुरा पनि साँचो हो कि म फर्केर आउँछु र तपाईं आफैंलाई लैजान्छु ताकि तपाईं म भएको ठाउँमा जानुहुन्छ। (जो। १,२))
के तपाईसँग कहिल्यै यस्तो चीजको लागि गहिरो इच्छा छ जुन चाँडै आउँछ? प्रथम शताब्दीका सबै मसीहीहरूले समेत ख्रीष्टको पुनरागमनको चाह गरे तर ती दिनहरूमा र त्यस युगमा उनीहरूले एउटा सरल अरामी प्रार्थनामा व्यक्त गरे: "मारानाथा", जसको अर्थ जर्मनमा रहेको छ: "हाम्रा प्रभु, आउनुहोस्!"
इसाईहरू येशूको आगमनको निम्ति आतुर थिए, जुन उनले माथिको खण्डमा प्रतिज्ञा गरे। उसले प्रतिज्ञा गर्छ कि ऊ यहाँ फर्केर आउँनेछ र यहाँ एउटा ठाउँ तयार पार्छ र हामी जहाँ हुन्छौं हामी सबै त्यस्तै हुनेछौं। ऊ आफ्नो फिर्तीको तयारी गर्न गएको थियो। त्यो उनको प्रस्थान को कारण थियो। जब व्यक्तिहरू हामी कहिलेकाँही प्रेममा आउँदछौं र त्यसपछि जान तयार हुन्छौ, हामी चाहन्छौं कि तिनीहरू रहन्छन्। तर हामीलाई थाहा छ उनीहरूसँग टाढा जाने कारणहरू छन् र येशूसँग पनि यसका कारणहरू थिए।
म पक्का छु कि येशू उत्सुकतासाथ आफ्नो आगमनको दिनको प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, सबै ईसाईहरूले गरेझैं; वास्तवमा, सबै सृष्टिले लामो समयदेखि शोक र ईर्ष्या गर्दछ जब परमेश्वरका सन्तानहरूले तिनीहरूका उत्तराधिकार पाउनेछन् (रोमी १: २ -8 --18१) र हुनसक्छ यो येशूको लागि घर आउँदैछ!
माथिको धर्मशास्त्रमा ध्यान दिनुहोस् जहाँ यो लेखिएको छ, "म तिमीलाई लिन आउँछु ताकि तिमी म भएको ठाउँमा छौ।" के त्यो ठूलो वाचा होइन? यो अचम्मको प्रतिज्ञालाई धर्मशास्त्रमा बारम्बार दोहोर्याइन्छ। प्रारम्भिक इसाई चर्चलाई लेखेका पावल १ थेसलोनिकी :1:१ in मा भन्छन् "प्रभु आफै स्वर्गबाट ​​प्रभुको दूतको आवाजमा, प्रधान दूतको आवाजमा र परमेश्वरको तुरहीको आवाजमा तल ओर्लनुहुनेछ!" तर मेरो प्रश्न हो: के ऊ फिर्ता आउनेछ र त्यो मलाकी रहनेछ?
प्रेरित यूहन्ना प्रकाश २१: 21-3-4मा आफ्नो भविष्यसूचक पत्रमा रिपोर्ट गर्छन्:
"तब मैले सिंहासनबाट एउटा ठूलो आवाज सुनें," हेर, परमेश्वरको बासस्थान मानिसहरूका बीचमा! उहाँ तिनीहरूसंग बस्नुहुनेछ, र तिनीहरू उहाँकै प्रजा हुनेछन्, र परमेश्वर आफैले उनीहरूसँगै, तिनीहरूका परमेश्वर बन्नुहुनेछ। उसले उसको आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनेछ, र मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि कहिल्यै शोक, चिच्याउने वा पीडा हुनेछ। किनकि पहिलो बितिसक्यो।
मलाई लाग्छ यो स्थायी सम्झौताको जस्तो देखिन्छ; येशू सधैंभरि रहन फर्कनुहुन्छ!
जब हामी यो अद्भुत घटनाको लागि अगाडि हेर्दछौं, अधीर हुनु सजिलो छ। हामी मानिसहरु मात्र पर्खनु मनपर्दैन; हामी चिन्तित हुन्छौं, हामी कराउँछौं र अक्सर थाम्छन्, तपाईंलाई थाँहा छ। यसको सट्टा, मैले छोटो अरमाईक प्रार्थना भन्नु पहिले नै "मारानाथा" भन्नु राम्रो हुन्छ - ठीक त्यस्तै: "प्रभु येशू ख्रीष्ट, आउनुहोस्!" आमेन।
प्रभु, हामी तपाईको फिर्तीको लागि आतुर छौं र हामी खुसी छौं कि तपाईले यो मालाकीलाई छाड्नुभयो र हामीसँग रहनुहुनेछ! आमेन